Moscow: Diyaarad ayaa ku jirta burbur, sababaha shilka ayaa lagu sheegay - TELES RELAY
ACCUEIL » UNES • DIB U EEGID AFRICAN PRESS • COMPANY Moscow: Diyaarad ayaa burburtay, sababaha shilka ayaa lagu sheegay
Moscow: Diyaarad ayaa burburtay, sababaha shilka ayaa lagu sheegay
ALEXIS WAYAN 6 May 2019
MOSCOW AIRPLANE - Diyaarad rakaab ah oo rakaab ah 78 ayaa ku dul dhacay Axaddii 5 May 2019, oo ku taal Madaarka Moscow ee Sheremetyevo. 41 dadku way dhinteen sida ku cad qoraalka dheelitirka ee ugu dambeeyay. Iftiimintu waxay ku lug lahaan doontaa sida ay u socoto tijaabada ...
[Cusbooneysiiyay 6 May 2019 ilaa 13h24] Axad 5 ayaa laga yaabaa in 2019, diyaarad ay la socdaan rakaabkii 78 ee ku yaala garoonka diyaaradaha ee Sheremetyevo ee magaalada Moscow. 41 dadku way dhinteen sida ku cad qoraalka dheelitirka ee ugu dambeeyay. A "baaris dambiile ah ee ku xadgudubka xeerarka amniga" ayaa loo furay si loo ogaado sababaha dhacdada, laakiin waxaan hore u ogaanay in diyaaradda, ee diyaaradda qaranka Ruushka Aeroflot, ka soo jiidatay garoonka diyaaradaha qaarkood qaar ka mid ah daqiiqado hore. Dhibaato farsamo ah oo la xidhiidha isgaadhsiinta, diyaarad ayaa lagu qasbay inay si dhakhso ah u noqoto. War saxaafadeedka, shirkadda Ruushku waxay sheegtey in "gubida mashiinnada duulimaadka" ay noqon karto sababta keentay xaalad degdeg ah.
AFP, oo ka soo xigatay warbaahinta Ruushka, ayaa sheegay subaxnimadii isniinta in version duulimaadka ay waxoogaa ka duwan tahay sii-dayntan. Oo sirkaalkii, Denis Evdokimov, ayaa sheegay in "Superjet Sukhoi ku 100 lahaa si ay u sameeyaan si degdeg ah ka dib markii qeyb ka mid ah qalabka ku laayeen badiyay ay sabab u tahay hillaac." "Maxaa yeelay, hillaac, waxaan laga badiyay raadiyaha oo wuxuu galay yar shukaanta xiriir (...) Taasi micnaheedu waa in, iyada oo computer ah sida caadiga ah, laakiin si toos ah," ayuu yiri duuliyaha, kuwaas oo waxay ka hadlaysaa "nidaam degdeg ah" ee ku yaalla ra'iisul wasaaraha Russia ee Komsomolskaya Pravda. "Waxaan u suurtagashay in ay soo celin xiriir via inta jeer ee degdegga ah, laakiin waxa uu ahaa gaaban ayay ka shaqeeyeen googo'an oo kaliya. (...) Waxaan awoodnay inaan sheegno ereyo kooban kadibna xiriirka ayaa la waayay, "ayuu raaciyay. Waxaa la ma, si kastaba ha ahaatee hillaac dab loogu sameeyo diyaaradda, laakiin deg deg ay sameeyn lahaa, sida ay darawalka. "Sababta dhabta ah waa kuwan soo socda: taangiyada ayaa buuxsamay".
Ilaha ugu horreeya ayaa soo sheegey dabka, sida ay AFP sheegayso. Laakiin "fiidiyoow la daabacay dhowr saacadood ka dib shilku" ayaa muujinaya diyaaradda "taabashada foornada, ka dibna ka boodaya ka hor inta aan la gubin".
Shil diyaarad oo ka dhacay magaalada Moscow: duuliyihii ayaa cambaareeyay iftiinka
Sababta ay Meghan iyo Harry u dhashay cunuga boqortooyadu marnaba ma noqon doono boqor ama boqor.